र लाख बती बालेको देख्ने बितिकै चोखो मनले ॐ लेखी सेयार गरौ – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/र लाख बती बालेको देख्ने बितिकै चोखो मनले ॐ लेखी सेयार गरौ
र लाख बती बालेको देख्ने बितिकै चोखो मनले ॐ लेखी सेयार गरौ
यस्ता पाँच काम गरेमा आफ्नो मनले चिताएको पुराहुन्छ ॐ लेखि पूरा पढ्नुहोस् मिल्नेछ तपाईको जीवनमा ठूलो सफलता-तपाईले जीवनमा यस्ता पाँच काम गरेमा आफ्नो मनले चिताएको पुरा हुन्छ ॐ लेखि पढ्नुहोस् मिल्नेछ ठूलो सफलता सोमबारको दिन देवताको पनि देवता आरध्यदेव महादेवको पूजा गरिन्छ । अविवाहित नारीले सुयोग्य बर पाउन तथा पतिको दीर्घायूको कामनासहित विवाहिता नारीले भगवान शिवको पूजा आरधना गर्ने गर्दछन् । यो दिन सेतो रंगको कपडा लगाउने र सेतै रंगको वस्तुहरुको दान गरेमा विशेष फल प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास गरिन्छ ।
हिन्दु सास्त्र अनुसार सोमबारका दिन भगवान शिवप्रति सोमबारका दिन भगवान शिवप्रति आउने उतार चढाव वा समस्या समाधानको लागि सोमवारको विहान सबेरै गौरी–शंकरलाई मनन गरी रुद्राक्ष शिव भगवानलाई अर्पर्ण गर्नाले मनले चिताएको पूरा हुने धार्मिक विश्वास गरिन्छ।२, सोमवार भगवान शिवको दिन अर्थाता चन्द्रमा का दिनका रुपमा लिइन्छ। यस दिन विहान सवेरै उठेर भगवान शिवको दर्शन गरी शिव चालीसा या शिवाष्टकको पाठ गर्नाले भगवान शिव प्रसन्न भइ समस्या समाधान हुने विश्वास गरियको छ।
सोमवारका दिन आफ्नो पायक पर्ने शिव मन्दिरमा पुगेर शिवलिंगमा दूध चढाउनुपर्छ । उक्त दूध तामाको भाडामा ल्याएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरेको ठाउँमा पूर्ण श्रद्धाका साथ छर्किदै ‘ॐ नमः शिवायः’ मन्त्रको जप गर्नाले व्यवसायमा श्रीवृद्धि हुने मान्यता राखिन्छ । ४, ॐ नमो धनदाय स्वाहा’ मन्त्र कुनै शिव मन्दिरमा गएर रुद्राक्षको मालाले ११ पटक जप गर्नुहस् ।
यस मन्त्रको जप गर्नाले धन लाभ हुने धार्मिक विश्वास छ त्यस्तै सोमबारको विहान बेलपत्रमा सेतो चन्दनको टीका बनाएर शिवलिंगको पूजा गर्नाले पनि फलिफाप हुने धार्मिक बिश्वास रहि आयको छ ।
यो पनि हेर्नुस् : के तपाइलाई थाहा छ नङमा देखिएको ‘अर्ध चन्द्राकार’को अर्थ ? यस्तो छ वास्तविकतायदि हामी आफ्नै शारीरिक अंगका बारेमा ध्यान दियौँ भने, कहिले त आफै अचम्ममा पर्छौ । जस्तै हाम्रो छालामा हुने छिद्र, हातमा बनेको बांगो–टिंगो रेखा, जसले अंगलाई पूर्णता दिएको हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिको नङ फरक–फरक हुन्छ ।
हात वा खुट्टा दुवै नङको आकार फरक हुन्छ, त्यस्तै एउटा चीज सबैमा हुन्छ, त्यो हो नङमा बनेको अर्ध चन्द्राकार । के तपाईले कहिल्यै नङमा बनेको सेतो अर्ध–चन्द्राकारको महत्वको बारेमा सोच्नुभएको छ ? यस आकारलाई अंग्रेजीमा ‘हाफ मुन’ भनिन्छ ।
खासमा यो अर्ध–चन्द्रकार निशान सेतो नहुने भन्ने गरिएको छ । यो नङले गर्दा सेता रंगको देखिएको हो । यस निशान नङको मुनितिर हुन्छ, तर यो ढाकिएकाले नङको कारण सेतो देखिने हुन्छ । नङको मुनि यो निशान सबैमा हुन्छ, तर, यस्तो निशान सबैमा देखिन्छ भन्ने चाहीँ हुँदैन ।
तर, यदि कम देखिएमा त्यो व्यक्ति रोगी रहेको बुझिन्छ । यस्ता व्यक्ति शारीरिक रुपले कमजोर हुने र उसको पाचन शक्ति पनि कमजोर हुन्छ । यो निशान जति धेरै सेतो, चम्किलो देखिन्छ उति नै व्यक्ति पनि शारीरिक एवं मानसिक रुपले तन्दुरुस्त मानिन्छ ।तर, हल्का मात्रै सेतो देखिएमा वा पहेलो देखिएमा व्यक्ति भित्र विषाक्त पदार्थ बढेको संकेत गर्छ । विभिन्न अनलाइनबाट साभार
मन्दिरभित्र पस्नु अगाडी ‘घण्टी’ किन बजाईन्छ ….?
उडिरहेको नागलाई देखेको5सेकेन्डमा ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस्। तपाईंको अधुरो काम बन्नेछ
यी युवतीसंग विहे गर्ने केटाले साढे ३ करोड इनाम पाउने. पूरा पढ्नुहोस्